Filtrer les éléments par date : lundi, 24 février 2020
lundi, 24 février 2020 18:04
SEMPAMA Nosy: Miandry vahaolana ato anatin’ny 72 ora
Manome 72 ora ny fanjakana, manomboka amin’ity alatsinainy 24 febroary ity, ny mpampianatra eo ambany fiahian’ny Ministeran’ny fanabeazam-pirenena sy fanofanana ara-teknika sy arak’asa, hanomezana vahaolana mikasika ireo fitakiana samihafa nataon’izy ireo.
Takian’ny mpampianatra ny famoahana ny didim-panjakana fampiharana ny « bonification FRAM », ny fanatanterahana ny sokajy na « catégorie 3 » sy « catégorie 4 » ho an’ireo mpampianatra nivoaka tamin’ireo toeram-panofanana isam-paritra na CRINFP.
Takian’izy ireo ny handraisana ho mpiasam-panjakana ireo FRAM be taona, mihoatra ny 45 taona sy ny hampidirana ao anatiny « bon de caisse » ny tambinkarama 50 000 Ariary efa tokony ho azo tamin’ny volana janoary 2020.
Tamin’ny fivoriambe teny Ampefiloha ny zoma 21 febroary 2020 no nanapahana io fe-potoana 72ora hoy ny fanazavan’ny tomponandraikitra eo anivon’ny sendika SEMPAMA Nosy.
lundi, 24 février 2020 17:59
Antoko HVM : Nanao vela-kevitra momba ny fanjakana tan-dalàna
« Fanjakana tan-dalàna, antoky ny fampandrosoana » io no lohahevitra novelabelarin’ny antoko Hery Vaovao ho an’i Madagasikara (HVM) tetsy amin’ny Carlton io tolakandro io. Noresahana betsaka nandritra izany ny raharaham-pirenena.
lundi, 24 février 2020 17:58
Thierra Bruno: Marary tsaboina ao amin’ny HJRA
Niditra hopitaly androany maraina, tsaboina ao amin’ny HJRA Ampefiloha i Thierra Bruno.
Miantso tolo-tanana amin’ny tsara sitrapo ny fianakaviana manoloana izao fotoan-tsarotra lalovan’ity mpanakanto ity izao.
lundi, 24 février 2020 09:43
Togo: Mandresy ny filoha amperinasa Faure Gnassingbé, hoy ny CENI
Namoaka vokatra vonjimaika ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana CENI any Togo, omaly alahady, fa dia mandresy avy hatrany tamin’ny fihodinana voalohany ny fifidianana filoham-pirenena natao ny 22 febroary teo i Faure Gnassingbé.
Nahazo 72,36% amin’ny vato manankery i Faure Gnassingbé, raha toa ka 18,37% no azon’ny manarakaraka azy dia i Agbéyomé Kodjo, praiminisitra teo aloha. Milaza ho mpandresy ihany koa ity farany, sady ny fisiana hosoka tamin’iny fifidianana iny.
Nanomboka ny taona 2005 i Faure Gnassingbé no nitondra an’i Togo. Filoha mpisolo toerana izy teo anelanelan’ny 7 sy 25 febroary 2005. Voafidy in-telo nisesy izy taorian’io dia ny 24 aprily 2005, 4 martsa 2010 ary 25 aprily 2015. Dia izao voafidy filoham-pirenena fanin’efany izao.
Lehiben’ny mpanaramaso ity fifidianana 2020 ity avy amin’ny Vondrona Afrikanina ny filoha malagasy teo aloha, Hery Rajaonarimampianina.
Coronavirus: Fanambaran'ny Masoivoho Malagasy any Italie